ရှေးတုနျးက ဒီလငျမယားနဲ့ ဒီဘုနျးကွီး ဘယျလောကျတောငျရိုးလဲဆိုရငျ ဘယျလို ရိုးတယျဆိုတာကို ဆုံးဖွတျရခကျ သှားတယျ -
HomeFUNNYရှေးတုနျးက ဒီလငျမယားနဲ့ ဒီဘုနျးကွီး ဘယျလောကျတောငျရိုးလဲဆိုရငျ ဘယျလို ရိုးတယျဆိုတာကို ဆုံးဖွတျရခကျ သှားတယျ
March 25, 2020 Alinn Pya FUNNY 0
အ ရိုး – – – န ရိုး – – – ဂှ ရိုး စာဖတျသူတှအေတှကျ အပွုံးပနျးတပှငျ့လောကျ ဖနျးတီးပေးခငျြစိတျလေး ပျေါလာလို့ ဒီဆောငျးပါးလေးရေးရခွငျးပါ.. လောကမှာ အရိုး ၃ မြိုးရှိပါတယျ၊ ( ရိုးသားဖွောငျ့မတျခွငျး ထဲက ရိုးသားတာကိုမဆိုလိုပါ) ( ၁ ) အ ရိုး (၂) န ရိုး ( ၃) ဂှ ရိုး ဆိုးပွီးရှိပါတယျ။ ၁- ဗဟုသုတ နညျးပါပွီး အေးအေးနဲ့ရိုးရိုးနတေကျတာဟာ (အ ရိုး ) ၂- ဗဟုသုတနညျးပါးရုံတငျမက အလုပျလုပျတဲ့နရောမှာ နမျောနမဲ့နဲ့ အမှားမှားအယှငျးယှငျး လုပျတကျ သူဟာ (န ရိုး ) ၃- (ဂှ ရိုး) ဆိုသူကတော့ ဗဟုသုတ တော့ အထိုကျအလြှောကျရှိပါတယျ၊ ဒါပမေဲ့ ပွောလိုကျရငျ တမငျပွော တာမဟုတျပမေဲ့ သူပွောတဲ့ စကား ဟာ အမွဲတမျးတဖတျလူနဲ့ ဂှတိုကျ သလိုပွောတကျသူ။ အဲဒီလို ၃ မြိုးရှိတဲ့အထဲက……………………….
တခါတုနျး က အလှနျတောခေါငျပွီး ဗဟုသုတ အတျေျာလေးနညျးပါးသော လူတှနေထေိုငျကွတဲ့ ရှာ လေးတရှာရှိပါသတဲ့၊ ဘယျလောကျထိ ဗဟုသုတ နညျးသလညျးဆိုတော့ အဲဒီ ရှာ ကလူ တှဟော မှနျ ကိုမမွငျ ဘူးကွပါဘူ့း။ တနတေ့ော့ တောငျယာ လယျယာစိုကျပြိုးပွီး လုပျကိုငျစာသောကျတဲ့ ကိုဖိုးထောငျ တယောကျ လယျထှနျးရငျးကနေ လယျကှကျထဲကနေ မှနျတခပျြ ကောကျရပါသတဲ့.. မှနျမှာပကြေံနတေဲ့ အညဈအကြေး တှကေို ပုဆိုးလေးနဲ့သုတျပွီး ကွညျ့လိုကျတော့ မှနျထဲမှာယောငျထုံးကွီးးနဲ့ ခနျ့ခနျ့ငွားငွား ယောကငြ်ျား တယောကျကို တှမွေ့ငျလိုကျရတဲ့အခါ… ဟာ … ကွညျ့စမျး ငါကြေးးဇူးရှငျဘကွီးရဲ့ပုံဘဲ၊ ဆိုပွီးအားရဝမျး သာစှာနဲ့ အိမျကိုယူလာပွီး အိမျးခနျးလေးထဲမှာသိမျးထားပါသတဲ့၊ အဲဒီနကေ့စပွီး လယျတောထဲကပွနျလာ တိုငျး ပထမဆုံးအိမျခနျးထဲဝငျးပွီး သိမျးထားတဲ့မှနျကိုထုပျပွီး ကွညျ့လရှေိ့ပါတယျ…အဲလိုကွညျ့ပွီး သူဘကွီး က သူ့ငယျရှယျစဉျအခါက သူ့အပျေါကောငျးခဲ့ ဂရုစိုကျခဲ့တာတှေ ကွငျနာခဲ့တာတှပွေနျလညျပွီး သတိတရရှိ နတေကျပါသတဲ့- – – အဲဒီလိုနဲ့ရကျကွာလာတဲ့အခါ ကိုဖိုးထောငျမိနျးမ မမှေးတယောကျ သူယောကငြ်ျားကို သံသယရှိလာပါ တယျ၊ ငါယောကငြ်ျား အပွငျကပွနျလာတိုငျး အိမျခနျး ထဲဝငျးပွီး ဘာဝငျလုပျတယျမသိ၊ အငျး တခုခုတော့ တခုခုဘဲ …
တနေ့ ကိုဖိုးထောငျ တောသို့သှားနခေိုကျ အိမျခနျးထဲဝငျရှာပါသတဲ့. ရှာရငျးကနေ ကိုဖိုးထောငျ သိမျးထားတဲ့ မှနျတခပျြသှားတှလေ့တေော့ မမှေးအပွေးအလှား ကောကျကိုငျပွီးအကွညျ့ …အောငျမလေး ကိုဖိုးထောငျရဲ့လို့ (၇) အိမျကွား(၈) အိမျကွားအျောငိုပါလရေော… ပါးစပျ ကလညျး .. ဟငျ ငါသူအပျေါ ဒီလောကျ မယားဝတ်တရား နဲ့အညီ သစ်စာရှိရှိမတ်ေတာမပကျြ ဂရုစိုကျပါရဲ့သားနဲ့ သူကငါအပျေါ … ဟငျး ကွညျ့ စမျး ကွညျ့စမျး – – – သူမယားငယျပုံကို သိမျးထားတယျ.ဆိုပွီး .. မှနျကိုကောကျကွညျင်ျ့လိုကျ .. မှနျထဲက ပုံကို မမှေးခမြှာ သူပုံမှနျးသူမသိ..ဖိုးထောငျရဲ့ တိတျတိတျလေးယူထားတဲ့ နောကျမယားငယျပုံလို့ထငျပွီး .. ရငျကှဲ မတကျ ခံစားလိုကျရတာ .. လယျတောကပွနျလာတဲ့ ဖိုးထောငျပုံမှနျအတိုငျး အိမျခနျးထဲအဝငျ မမှေးက ဖိုးထောငျကိုမွငျလြှငျ မွငျးခငျြး …အောငျမလေးကိုဖိုးထောငျရဲ့ – – – တျော ကြှနျမ အပျေါ ဘာမကနြေပျလို့လညျး ..ကြှနျမ ကတော့ လေ ရှငျအပျေါ ခဈြလိုကျရတာ သံယောဇဉျတှပေိုလိုကျရတာ.လငျတမကျြနှာ တရှာထငျပွီးလိုကျနရေတာ….
တမိုးအောကျ တယောကျထငျပွီး ခဈြလိုကျရတာ တျောကတော့ ဒီလိုမဟုတျ..ကြှနျမအေပျေါကို သစ်စာ ဖေါကျရကျလခွေငျးဆိုပွီး ပွောလဲပွောငိုလဲငို ဖိုးထောငျရငျဘကျကွီးကိုလညျး လကျသီးဆုပျနဲ့ထုထုပွီး နလေိုကျတာ ..ဖိုးထောငျခမြာ ဘာမှမသိရှာ ..အံ့သွပွီး ဟဲ့ မမှေး မငျးဘာဖွဈလို့လညျး နမေကောငျးဘူလား ပွစမျးနဖူးဆိုပွီး လကျဖဝါးလေးနဲ့စမျးကွညျ့ အဖြားသှေးလညျးမရှိပါဘူး … နကျမြားဖမျးစားထားလား။ စသညျ ဖွငျ့ ပြာပြာသလဲစိုးရိမျနတောကို မမှေးက – – တျော ခုမှလာပွီးကွငျနာခငျြ ယောငျဆောငျမနနေဲ့ စိတျနာ တယျ စိတျနာတယျ .. အျောပါလရေော.. မှေး .. အကြိုးအကွောငျးကို ယောကငြ်ျားလညျးပွောပွအုံးလကှေယျ ..ဘာပွောပွဘို့လိုသေးလညျး ကိုဖိုးထောငျရဲ့ လယျပွငျမှာဆငျသှားသလို ထငျရှားနတောကို တျောက ဆငျသကေို ဆိတျသားရနေဲ့ဖုံးခငျြ တာလား သကျသသေက်ကာယနဲ့ပွမယျဆိုပွီး မှနျကိုထုပျပွ ဒီမှာကွညျ့စမျး ဒါတျော မယားငယျ ပုံ မဟုတျလား ကွညျ့းစမျးသနပျခါး ပါးကှတျကွားကွီး နဲ့ ဘီးစပတျကွီးနဲ့ အောငျမလေး ကိုဖိုးထောငျ ရဲ့ ဆိုပွီး ငိုပါလရေော… ဖိုးထောငျကလညျး ဟာမဟုတျတာကှာ…ပွစမျးဒီမှာကွညျ့ ..
ဒါက ငါဘကွီးပုံကှ မှနျယူကွညျ့ကာ သူ့ဘကွီး ဆိုသူဖွဈကွောငျးဆိုပွီးပွော မမှေးကလညျးကလညျး မှနျတခါပွနျယူပွီး ဘယျကရှငျ့ဘကွီး ပုံဟုတျရမှာ လညျး ဒီမှာကွညျ့ တျောမယားငယျပုံလေ ဆိုပွီးပွနျပွော နောကျဆုံး ဖိုးထောငျက ကဲ ဒို့ဒီလိုငွငျးခုံနရေငျ မပွီးတော့ဘူး ရှားဦးကြောငျးဆရာတျောဆီသှားပွီး အဆုံးအဖကျြခံမယျဆိုပွီး လငျမယားနှဈယောကျ တယောကျတပေါကျ သူတပွနျ ကိုယျတခါလှညျ့ပွောပွီး ရှာဦးကြောငျးဆရာတျော ထံရောကျလာကွပါတော့ တယျ..ရှေးတုနျးက တခြို့ရှာတှမှော ရှာဦးကြောငျးဆရာတျောတှကေ အထိုကျအလြောကျ သွဇာညောငျးကွပါတယျ…ခုလညျး ကိုဖိုးထောငျတို့ လငျမယား ရှားဦးကြောငျးဆရာတျော ထံမှောကျ ငိုငိုရီရီ နဲ့ ရောကျလာကွပါတော့တယျ၊ ဆရာတျောလညျး ဟဲ့ ဟဲ့ ဘယျလိုဖွဈလာကွတာတုနျး မကျြနှာတှကေလညျး မသာမယာနဲ့ ပွောစမျး ဟ ဖွဈသမြှအကွောငျးအစုံအလငျ မမှေးကစပွီး ဆရာတျောဘုရား ဆရာတျောတပညျ့က တပညျ့တျောမ အပျေါမှာ သစ်စာဖေါကျတယျဘုရား ဟဲ့ မိမှေးရယျနငျဟာက ဟုတျရဲ့လားဟာ၊ မဟုတျရှိရိုးလားဘုရား ဒီမှာ ကွညျ့ပါ ဘုရား သူမယားပုံဆိုပွီး မှနျကွညျ့ပွီး လြှောကျတယျ၊
ဖိုးထောငျ ကလညျး ဆရာတျောဘုရား သူ (မမှေး) တပညျ့တျောအပျေါ အမွငျမှားတာပါဘုရားဆိုပွီး မမှေးလကျထဲက မှနျကိုရုပျတရပျလုယူပွီး ဒီမှာ ကွညျ့ပါဘုရား တပညျ့တျော ဘကွီးပုံပါဘုရား ဆိုပွီးပွနျ လြှောကျတယျ၊ ဟယျ နငျတို့ဟာက မဟုတျသေး ပါဘူး ငါပွစမျးဆိုပွီး ရှာဦးကြောငျးဆရာတျောက ဖိုးထောငျလကျထဲမှာရှိတဲ့ မှနျကိုရုပျတရကျ ယူပွီးအကွညျ့ ဟေ……မငျးတိုဟာက .ဘယျလိုဖွဈကွတာတုနျး…ငရဲတှကွေီးကုနျတော့မှာပဲ ဒီပုံက ဘဝတပါးပြံလှနျ တျောမူသှားတဲ့ ငါရဲ့လကျဦးဆရာတျောပုံပါဟာ ကွညျ့စမျး ဥပဓိရုပျက ခနျ့ခနျု့ငွားငွားနဲ့ မကျြခုံးကကောငျး ကောငျး ခေါငျးကလညျး ပွောငျနတောပဲ ကွညျ့စမျးဆိုပွီး ဆရာတျော ကရှမှေ့ာမှနျခြ မကျြစိစုံမျှိတျပွီး သူ့ဆရာဂုဏျတှကေို အာရုဏျပွုပွီး ဦးခပြါသတဲ့…….. ကဲ…စာဖတျသူ အနနေဲ့ ရှာဦးကြောငျးဆရာတျောအပါအဝငျ ဖိုးထောငျတို့ မမှေးတို့ အရိုး ဘာ အရိုး လို့ဆိုခငျြပါသလညျး ဘယျလိုပဲဖွဈနဖွေဈနေ ရှတေု့နျးကရော ယခုကာလမှာပါ လူတှဟော အဖွဈမှနျမသိသမြှ အပွဈတငျကွတာ အစဉျအလာလိုဖွဈနတေကျပါတော့တယျလေ.. အဲဒီတော့ အကွောငျးအရာတခုကို သုံသပျ ဆုံးဖကျြတဲ့နရောမှာ အမှားမကငျးနိုငျကွပမေဲ့ အမှားနညျးအောငျ တော့ သတိထားဆငျခွငျနိုငျကွပါစေ။
ရှေးတုန်းက ဒီလင်မယားနဲ့ ဒီဘုန်းကြီး ဘယ်လောက်တောင်ရိုးလဲဆိုရင် ဘယ်လို ရိုးတယ်ဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်ရခက် သွားတယ်
အ ရိုး – – – န ရိုး – – – ဂွ ရိုး စာဖတ်သူတွေအတွက် အပြုံးပန်းတပွင့်လောက် ဖန်းတီးပေးချင်စိတ်လေး ပေါ်လာလို့ ဒီဆောင်းပါးလေးရေးရခြင်းပါ.. လောကမှာ အရိုး ၃ မျိုးရှိပါတယ်၊ ( ရိုးသားဖြောင့်မတ်ခြင်း ထဲက ရိုးသားတာကိုမဆိုလိုပါ) ( ၁ ) အ ရိုး (၂) န ရိုး ( ၃) ဂွ ရိုး ဆိုးပြီးရှိပါတယ်။ ၁- ဗဟုသုတ နည်းပါပြီး အေးအေးနဲ့ရိုးရိုးနေတက်တာဟာ (အ ရိုး ) ၂- ဗဟုသုတနည်းပါးရုံတင်မက အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာ နမော်နမဲ့နဲ့ အမှားမှားအယွင်းယွင်း လုပ်တက် သူဟာ (န ရိုး ) ၃- (ဂွ ရိုး) ဆိုသူကတော့ ဗဟုသုတ တော့ အထိုက်အလျှောက်ရှိပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ပြောလိုက်ရင် တမင်ပြော တာမဟုတ်ပေမဲ့ သူပြောတဲ့ စကား ဟာ အမြဲတမ်းတဖတ်လူနဲ့ ဂွတိုက် သလိုပြောတက်သူ။ အဲဒီလို ၃ မျုိးရှိတဲ့အထဲက……………………….
တခါတုန်း က အလွန်တောခေါင်ပြီး ဗဟုသုတ အတော်လေးနည်းပါးသော လူတွေနေထိုင်ကြတဲ့ ရွာ လေးတရွာရှိပါသတဲ့၊ ဘယ်လောက်ထိ ဗဟုသုတ နည်းသလည်းဆိုတော့ အဲဒီ ရွာ ကလူ တွေဟာ မှန် ကိုမမြင် ဘူးကြပါဘူ့း။ တနေ့တော့ တောင်ယာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးပြီး လုပ်ကိုင်စာသောက်တဲ့ ကိုဖိုးထောင် တယောက် လယ်ထွန်းရင်းကနေ လယ်ကွက်ထဲကနေ မှန်တချပ် ကောက်ရပါသတဲ့.. မှန်မှာပေကျံနေတဲ့ အညစ်အကျေး တွေကို ပုဆိုးလေးနဲ့သုတ်ပြီး ကြည့်လိုက်တော့ မှန်ထဲမှာယောင်ထုံးကြီးးနဲ့ ခန့်ခန့်ငြားငြား ယောင်္ကျား တယောက်ကို တွေ့မြင်လိုက်ရတဲ့အခါ… ဟာ … ကြည့်စမ်း ငါကျေးးဇူးရှင်ဘကြီးရဲ့ပုံဘဲ၊ ဆိုပြီးအားရဝမ်း သာစွာနဲ့ အိမ်ကိုယူလာပြီး အိမ်းခန်းလေးထဲမှာသိမ်းထားပါသတဲ့၊ အဲဒီနေ့ကစပြီး လယ်တောထဲကပြန်လာ တိုင်း ပထမဆုံးအိမ်ခန်းထဲဝင်းပြီး သိမ်းထားတဲ့မှန်ကိုထုပ်ပြီး ကြည့်လေ့ရှိပါတယ်…အဲလိုကြည့်ပြီး သူဘကြီး က သူ့ငယ်ရွယ်စဉ်အခါက သူ့အပေါ်ကောင်းခဲ့ ဂရုစိုက်ခဲ့တာတွေ ကြင်နာခဲ့တာတွေပြန်လည်ပြီး သတိတရရှိ နေတက်ပါသတဲ့- – – အဲဒီလိုနဲ့ရက်ကြာလာတဲ့အခါ ကိုဖိုးထောင်မိန်းမ မမွှေးတယောက် သူယောင်္ကျားကို သံသယရှိလာပါ တယ်၊ ငါယောင်္ကျား အပြင်ကပြန်လာတိုင်း အိမ်ခန်း ထဲဝင်းပြီး ဘာဝင်လုပ်တယ်မသိ၊ အင်း တခုခုတော့ တခုခုဘဲ …
တနေ့ ကိုဖိုးထောင် တောသို့သွားနေခိုက် အိမ်ခန်းထဲဝင်ရှာပါသတဲ့. ရှာရင်းကနေ ကိုဖိုးထောင် သိမ်းထားတဲ့ မှန်တချပ်သွားတွေ့လေတော့ မမွှေးအပြေးအလွှား ကောက်ကိုင်ပြီးအကြည့် …အောင်မလေး ကိုဖိုးထောင်ရဲ့လို့ (၇) အိမ်ကြား(၈) အိမ်ကြားအော်ငိုပါလေရော… ပါးစပ် ကလည်း .. ဟင် ငါသူအပေါ် ဒီလောက် မယားဝတ္တရား နဲ့အညီ သစ္စာရှိရှိမေတ္တာမပျက် ဂရုစိုက်ပါရဲ့သားနဲ့ သူကငါအပေါ် … ဟင်း ကြည့် စမ်း ကြည့်စမ်း – – – သူမယားငယ်ပုံကို သိမ်းထားတယ်.ဆိုပြီး .. မှန်ကိုကောက်ကြည်င့်္လိုက် .. မှန်ထဲက ပုံကို မမွှေးခမျှာ သူပုံမှန်းသူမသိ..ဖိုးထောင်ရဲ့ တိတ်တိတ်လေးယူထားတဲ့ နောက်မယားငယ်ပုံလို့ထင်ပြီး .. ရင်ကွဲ မတက် ခံစားလိုက်ရတာ .. လယ်တောကပြန်လာတဲ့ ဖိုးထောင်ပုံမှန်အတိုင်း အိမ်ခန်းထဲအဝင် မမွှေးက ဖိုးထောင်ကိုမြင်လျှင် မြင်းချင်း …အောင်မလေးကိုဖိုးထောင်ရဲ့ – – – တော် ကျွန်မ အပေါ် ဘာမကျေနပ်လုိ့လည်း ..ကျွန်မ ကတော့ လေ ရှင်အပေါ် ချစ်လိုက်ရတာ သံယောဇဉ်တွေပိုလိုက်ရတာ.လင်တမျက်နှာ တရွာထင်ပြီးလိုက်နေရတာ….
တမိုးအောက် တယောက်ထင်ပြီး ချစ်လိုက်ရတာ တော်ကတော့ ဒီလိုမဟုတ်..ကျွန်မေအပေါ်ကို သစ္စာ ဖေါက်ရက်လေခြင်းဆိုပြီး ပြောလဲပြောငိုလဲငို ဖိုးထောင်ရင်ဘက်ကြီးကိုလည်း လက်သီးဆုပ်နဲ့ထုထုပြီး နေလိုက်တာ ..ဖိုးထောင်ခမျာ ဘာမှမသိရှာ ..အံ့သြပြီး ဟဲ့ မမွှေး မင်းဘာဖြစ်လို့လည်း နေမကောင်းဘူလား ပြစမ်းနဖူးဆိုပြီး လက်ဖဝါးလေးနဲ့စမ်းကြည့် အဖျားသွေးလည်းမရှိပါဘူး … နက်များဖမ်းစားထားလား။ စသည် ဖြင့် ပျာပျာသလဲစိုးရိမ်နေတာကို မမွှေးက – – တော် ခုမှလာပြီးကြင်နာချင် ယောင်ဆောင်မနေနဲ့ စိတ်နာ တယ် စိတ်နာတယ် .. အော်ပါလေရော.. မွှေး .. အကျိုးအကြောင်းကို ယောင်္ကျားလည်းပြောပြအုံးလေကွယ် ..ဘာပြောပြဘို့လိုသေးလည်း ကိုဖိုးထောင်ရဲ့ လယ်ပြင်မှာဆင်သွားသလို ထင်ရှားနေတာကို တော်က ဆင်သေကို ဆိတ်သားရေနဲ့ဖုံးချင် တာလား သက်သေသက္ကာယနဲ့ပြမယ်ဆိုပြီး မှန်ကိုထုပ်ပြ ဒီမှာကြည့်စမ်း ဒါတော် မယားငယ် ပုံ မဟုတ်လား ကြည့်းစမ်းသနပ်ခါး ပါးကွတ်ကြားကြီး နဲ့ ဘီးစပတ်ကြီးနဲ့ အောင်မလေး ကိုဖိုးထောင် ရဲ့ ဆိုပြီး ငိုပါလေရော… ဖိုးထောင်ကလည်း ဟာမဟုတ်တာကွာ…ပြစမ်းဒီမှာကြည့် ..
ဒါက ငါဘကြီးပုံကွ မှန်ယူကြည့်ကာ သူ့ဘကြီး ဆိုသူဖြစ်ကြောင်းဆိုပြီးပြော မမွှေးကလည်းကလည်း မှန်တခါပြန်ယူပြီး ဘယ်ကရှင့်ဘကြီး ပုံဟုတ်ရမှာ လည်း ဒီမှာကြည့် တော်မယားငယ်ပုံလေ ဆိုပြီးပြန်ပြော နောက်ဆုံး ဖိုးထောင်က ကဲ ဒို့ဒီလိုငြင်းခုံနေရင် မပြီးတော့ဘူး ရွားဦးကျောင်းဆရာတော်ဆီသွားပြီး အဆုံးအဖျက်ခံမယ်ဆိုပြီး လင်မယားနှစ်ယောက် တယောက်တပေါက် သူတပြန် ကိုယ်တခါလှည့်ပြောပြီး ရွာဦးကျောင်းဆရာတော် ထံရောက်လာကြပါတော့ တယ်..ရှေးတုန်းက တချို့ရွာတွေမှာ ရွာဦးကျောင်းဆရာတော်တွေက အထိုက်အလျောက် သြဇာညောင်းကြပါတယ်…ခုလည်း ကိုဖိုးထောင်တို့ လင်မယား ရွားဦးကျောင်းဆရာတော် ထံမှောက် ငိုငိုရီရီ နဲ့ ရောက်လာကြပါတော့တယ်၊ ဆရာတော်လည်း ဟဲ့ ဟဲ့ ဘယ်လိုဖြစ်လာကြတာတုန်း မျက်နှာတွေကလည်း မသာမယာနဲ့ ပြောစမ်း ဟ ဖြစ်သမျှအကြောင်းအစုံအလင် မမွှေးကစပြီး ဆရာတော်ဘုရား ဆရာတော်တပည့်က တပည့်တော်မ အပေါ်မှာ သစ္စာဖေါက်တယ်ဘုရား ဟဲ့ မိမွှေးရယ်နင်ဟာက ဟုတ်ရဲ့လားဟာ၊ မဟုတ်ရှိရိုးလားဘုရား ဒီမှာ ကြည့်ပါ ဘုရား သူမယားပုံဆိုပြီး မှန်ကြည့်ပြီး လျှောက်တယ်၊
ဖိုးထောင် ကလည်း ဆရာတော်ဘုရား သူ (မမွှေး) တပည့်တော်အပေါ် အမြင်မှားတာပါဘုရားဆိုပြီး မမွှေးလက်ထဲက မှန်ကိုရုပ်တရပ်လုယူပြီး ဒီမှာ ကြည့်ပါဘုရား တပည့်တော် ဘကြီးပုံပါဘုရား ဆိုပြီးပြန် လျှောက်တယ်၊ ဟယ် နင်တို့ဟာက မဟုတ်သေး ပါဘူး ငါပြစမ်းဆိုပြီး ရွာဦးကျောင်းဆရာတော်က ဖိုးထောင်လက်ထဲမှာရှိတဲ့ မှန်ကိုရုပ်တရက် ယူပြီးအကြည့် ဟေ……မင်းတိုဟာက .ဘယ်လိုဖြစ်ကြတာတုန်း…ငရဲတွေကြီးကုန်တော့မှာပဲ ဒီပုံက ဘဝတပါးပျံလွန် တော်မူသွားတဲ့ ငါရဲ့လက်ဦးဆရာတော်ပုံပါဟာ ကြည့်စမ်း ဥပဓိရုပ်က ခန့်ခန့်ုငြားငြားနဲ့ မျက်ခုံးကကောင်း ကောင်း ခေါင်းကလည်း ပြောင်နေတာပဲ ကြည့်စမ်းဆိုပြီး ဆရာတော် ကရှေ့မှာမှန်ချ မျက်စိစုံမှိ်တ်ပြီး သူ့ဆရာဂုဏ်တွေကို အာရုဏ်ပြုပြီး ဦးချပါသတဲ့…….. ကဲ…စာဖတ်သူ အနေနဲ့ ရွာဦးကျောင်းဆရာတော်အပါအဝင် ဖိုးထောင်တို့ မမွှေးတို့ အရိုး ဘာ အရိုး လို့ဆိုချင်ပါသလည်း ဘယ်လိုပဲဖြစ်နေဖြစ်နေ ရှေ့တုန်းကရော ယခုကာလမှာပါ လူတွေဟာ အဖြစ်မှန်မသိသမျှ အပြစ်တင်ကြတာ အစဉ်အလာလိုဖြစ်နေတက်ပါတော့တယ်လေ.. အဲဒီတော့ အကြောင်းအရာတခုကို သုံသပ် ဆုံးဖျက်တဲ့နေရာမှာ အမှားမကင်းနိုင်ကြပေမဲ့ အမှားနည်းအောင် တော့ သတိထားဆင်ခြင်နိုင်ကြပါစေ။